I-16 yeyona fps / tps (umdlalo wokuqala kunye nowesithathu wokudlala) imidlalo ye-android, iphone kunye ne-ipad
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-16 yeyona FPS / i-TPS ilungileyo (eyokuqala neyesithathu yomntu othutha) imidlalo ye-Android, i-iPhone kunye ne-iPad
I-16 yeyona FPS / i-TPS ilungileyo (eyokuqala neyesithathu yomntu othutha) imidlalo ye-Android, i-iPhone kunye ne-iPad
Abahlaseli yisonka kunye nebhotolo yokudlala - banikezela nge-adrenaline-packed, inyathelo elinamandla elikusahlula ngokukhawuleza kwinyani kwaye lisivulele umphunga kwinkqubo.
Ngee-smartphones eziba nkulu, imiboniso ephezulu yokusombulula kunye neetshipsi ezinamandla ngakumbi, ezinye iimodeli zide zenzelwe ngokukodwa umdlalo, akukho ndawo & apos; akubanga xesha lingcono lokudlala imidlalo kwifowuni yakho. Abaphuhlisi abanalo ulele kuloo mkhwa kwaye babonelela ngokuhamba rhoqo kwezihloko ezitsha ukonwabela.
Kodwa yeyiphi eyona midlalo yokudubula yomntu wokuqala nowesithathu ye-Android, i-iPhone kunye ne-iPad? Ngezigidi zeeapps onokukhetha kuzo, kunokuba nzima ukukhetha ezifanelekileyo. Kungenxa yoko le nto sikhethe imidlalo ye-FPS ephezulu ye-16 kunye nemidlalo ye-TPS kwiVenkile yeApple yeApple nakwiVenkile yokuDlala kuGoogle.
Xa kuziwa kwimidlalo, iselfowuni okanye ngenye indlela, i-2018 inokuchazwa ngokulula ngegama elinye: Fortnite. I-Epic & apos; idabi royale lomntu wesithathu odubulayo ngoku uthandwa kakhulu, akukho & apos akukho sidingo sokuchaza umdlalo. Okwangoku, ukuba uphume nje ebusika kwaye awuzange uve ngako, nantsi eyona nto iphambili: utsibela ngaphandle kwebhasi ephaphazelayo, umhlaba kwisiqithi kwaye uqalise ukubetha yonke into oyibonayo. Xa wena & apos; ungaxakekanga ukonakalisa imeko-bume yakho, awuzami ukubulala nabani na owela umendo wakho. Injongo yakho ilula: yiba ngowokugqibela uphila. Owu, ewe, unokwakha izakhiwo ezichaseneyo nefiziksi, ukongeza kwisiphithiphithi sayo yonke into.
Khuphela kwi I-Android : ios Ixabiso: Simahla / IAP
I-PUBG yi-Fortnite & apos; oqolileyo ngakumbi, umzala ojongeka ngokwenyani. Kwakhona, uzifumana ushiyeke kwisiqithi kunye neqela labantu abazama ukukuyeka. Ukuba ufumana izixhobo ezifanelekileyo kwaye uzulazule kwindawo yokudlala ehlala incipha ngokufanelekileyo, uya kuba nethuba elihle lokuphumelela. Kodwa ekupheleni kosuku, kuya kufikelela kwizakhono zakho zokujolisa ukukugcina uphila, kwaye sonke siyazi kwiselfowuni ukuba ayisiyonto encinci leyo. Kukho nesizathu sokuba abantu bonwabele ukudlala imidlalo yedabi-indawo yokuzingela-okanye-ukuba-yindawo yokuzingelwa yongeza inqanaba elitsha kumava okudlala.
IShadowgun: Iintsomi yenye yezona midlalo zityebileyo zeFPS ezikhoyo kwiselfowuni. Inomkhankaso ofanelekileyo womdlali omnye, iintlanganiso zokubambisana, ukuhlaselwa kwaye kunjalo, iimfazwe zePvP. Indawo yokulinda esemdlalweni yenzelwe njenge dolophu kwaye iya kukunika imvakalelo yedesktop epheleleyo okanye umdlalo weconsole. Zininzi izinto onokuzivula kwaye ungenza ngokusesikweni yonke into ukusuka kumlinganiswa wakho ukuya kwizixhobo zakho. Yonke into eza simahla, kodwa ngesiqhelo somqolo - ukuthengwa komdlalo. Okwangoku, into oyifumanayo simahla iyamangalisa kwaye ngokuqinisekileyo kufanelekile ukuba uyijongisise ukuba ngaba & apos; ekuzingeleni i-shooter ngobunzulu bayo.
Ukulwa okwangoku 5: UkuCima
Ufakelo lwesihlanu kuthotho lokudubula lomntu wokuqala luza nemizobo engcono nangaphezulu kunangaphambili, imo yomdlali osisityebi, oqhutywa libali, kunye nokhetho lomdlalo wabadlali abaninzi apho iqela labadlali lijongana emfazweni. Ukulwa kwalemihla 5 kwazisa ngeeklasi ezine zamagorha oza kuthi ukhethe kuwo: Ukubetha, uHeavy, uRecon, okanye uSniper. Ukukhetha iklasi kuchaza indlela oza kudlala ngayo, kwaye kokukhona uya phambili kumdlalo, kokukhona uya ukhulisa izakhono zakho zeklasi.
Imowudi yomdlali omnye iphucule kakhulu ukusukela ukuLwa kwe-4 yanamhlanje, ikusa kwiindawo ezahlukeneyo, ukusuka eVenice ukuya eTokyo, kodwa ikwayilo loyilo kumdlalo-ukusuka kwimishini apho ukhusela umntu, ukuya kwimiboniso bhanyabhanya apho iqhawe lakho liphambana stunts ukuze baphile, emva koko badubula kwihelikopta, nokunye okuninzi. I-MC5 entsha: Ukucinywa komnyama ziitoni zokuzonwabisa! Umdlalo wabadlali abaninzi, nangona kunjalo, kulapho izinto ziye zenze impambano ngamadabi eqela, ingxoxo yehlabathi kunye ne-squat, iibhodi zabaphambili, nayo yonke into ephakathi ukuze ubambeke.
Umcwangcisi ofileyo 2
Njengakwisavenge sokuqala somdlalo, kwi-Dead Trigger 2 umdlali kufuneka aphile nangayiphi na indlela eyimfuneko kwaye azikhusele kumaza alandelayo weZombi ezilambele inyama. Ngeli xesha, nangona kunjalo, awuzukuhlala wedwa kule nzame. Kungenxa yokuba i-Dead Trigger 2 ijolise kwimidlalo yokudlala eyahlukeneyo apho ibali likhula ngexesha lokwenyani kubo bonke abathathi-nxaxheba. Kwaye iinzame zomdlali ngamnye zibaliwe.
Ewe kunjalo, uphuculo olunyanzelekileyo kwisebe yemizobo lukhona ngenene. Kwi-Trigger 2 efileyo uya kubona ukubona kwexesha lamanzi okwenene, uhlaza olunamandla, kunye ne-ragdoll physics eyandisiweyo. Amanqanaba enziwe ukuba makhulu nawo, enika umdlali inkululeko engakumbi yokuphonononga kunye neendawo zokuzimela.Khuphela kwi I-Android : ios Ixabiso: Simahla / IAP
Njengoko thina & apos sithetha ngokudubula i-zombie, i-Unkilled yenye yezona zinto zintsha zibalaseleyo: Amava esiXeko saseNew York agqitywe yiZombies kwaye wena, Joe, kwimishini yokumisa uhlaselo ngeyunithi ye-Wolfpack echasene ne-zombie. Ngemishini engaphezu kwama-300, itoni yeentshaba ezahlukeneyo zombie kunye nabaphathi be-zombie kubandakanya isheriffs, i-butcher kunye nokunye, kunye noluhlu olubanzi lwezixhobo onazo (umpu, ewe, kodwa umpu we-sniper kunye nezinye ezininzi). Umdlalo uxhasa ulawulo lwe-MFG kunye neendlela ezininzi zemidlalo.
Umdlalo onje ngeCounter Strike wezixhobo eziphathwayo ezinomdlalo we-Intanethi, lo mntu wokuqala wokudubula ubonakalisa umdlalo weqhinga, imizobo ekumgangatho ophezulu kunye nesenzo esikhawulezayo. Zininzi izibhamu onokukhetha kuzo, kwaye ziseza. Yilwa njengeqela le-CT elichasene nobunqolobi okanye iqela labanqolobi kwaye utyale okanye uchithe ibhombu. Dlala kwiimephu zobuchule ezisekwe kubuchule kwaye uzise iqela lakho empumelelweni.
Imipu yaseBoom yikhathuni emnandi ye-PVP ekwi-Intanethi, apho ungena emkhosini. Oku akuyiyo umkhosi oqhelekileyo, nangona kunjalo. Akukho mntu uya kukuxelela ukuba wenzeni okanye udubule phi. Kuya kufuneka uthathe izigqibo zakho kwaye ukhethe awakho amadabi. Dibana namanye amajoni, yenza kakuhle ekubulaleni abachasi kwaye ulawule idabi. Yenza uhlaselo lwe-blitz, ukutshiza isikhokelo kuwo onke amacala, okanye uzame ukudubula umchasi wakho umgama okhuselekileyo, uthathe ixesha lakho ukujolisa ngqo entlokweni. Ihlala ikufowuna.
Intshatsheli Ilifa ngumdubuli weSci-fi kunye nomlibo wokuzalwa. Izibonakalisile njengenye yezona zinto zibalaseleyo kuhlobo kwiminyaka edlulileyo kodwa ii-apos azibayekisi abaphuhlisi ukuba bongeze umxholo kunye nokupholisha umdlalo weqonga. Ngeendlela ezahlukeneyo zomdlalo, kubandakanya nomdlali omnye, kunye nezinto onokukhetha kuzo ngokwezifiso zegiya yakho, lo mdlalo uya kukugcina uxakekile iiyure.
Iimfazwe zeHlabathi zeHlabathi: WW2 Shooter
Amaqhawe emfazwe yeHlabathi aya kubetha intambo yokukhumbula abo bakhumbula iintsuku zeMfazwe: 1942. Lo mdlalo unemvakalelo efanayo kunye nokuseta izixhobo, kwaye inezithuthi onokuzisebenzisa! Uyakwazi ukukhetha phakathi kweendlela ezi-5 ezikhoyo zomdlalo, ezinye zazo zivuliwe xa ufikelela kwinqanaba elithile. Ukuba awukuthandi ukulandela imigaqo emiselweyo, ungasoloko usenza umdlalo wesiko kunye neemeko zokuphumelela kunye nezinye iisetingi ozikhethileyo kwaye wonwabele ukukhawulezisa ngokukhawuleza nabahlobo bakho.
IiOps eziPhambili (C-Ops)
I-Ops ebalulekileyo yi-FPS ekhawulezayo eya kuvavanya iingqondo zakho kunye nobuchule bokusebenza. Amava okonwaba kwemfazwe yanamhlanje yobunqolobi njengoko usilwa uqhankqalazo olunobuzaza njengesiqhushumbisi okanye ujonge ukubulala njengonqolobi. Lwela ukongamela ecaleni kwabahlobo bakho, okanye ubonise umhlaba ngesakhono sakho ngokukhokela ibhodi yamanqaku nganye.
I-Shadowgun: I-DeadZone ngumdlalo wabadlali abaninzi kuphela, ekuvumela ukuba ulwe nabanye abadlali abavela kwihlabathi liphela. Umdlalo ugcina ukujonga komntu wesithathu, kunye nekhamera elandela umlingiswa wakho, kwaye ungasebenzisa nenkqubo yokugubungela eyayikho kumdlalo wokuqala, eyenza izinto zibe nomdla ngakumbi. Kukho iindlela: Deathmatch kunye noLawulo loMmandla. Eyokuqala ayifuni nkcazo, ngelixa lelesibini lisekwe kwiqela, ngamanqaku olawulo ambalwa athe saa kwimephu. Wena nabalingani bakho kufuneka nihlale kufutshane namanqaku ukuze nilawule kwaye niphumelele ngamanqaku.
IPixel Gun 3D
Ukongeza iintlobo ezahlukeneyo ngokwe-aesthetics yiPixel Gun 3D. Uhlobo lwegrafiki yalo mdlalo lubonwa kwangoko njengoko luphefumlelwe nguMinecraft, kodwa imeko yokudubula ilungile njengalo naluphi na olu luhlu. Kukho iindlela ezaneleyo zabadlali abaninzi ukwanelisa nawuphi na umlandeli weFPS kunye nemowudi yendlela yedabi (ewe ikhona) iyamangalisa ukuba iphume kakuhle. Ukulinganisa umlingiswa wakho kunye nokuqokelela kwimali yomdlalo kuya kukuvumela ukuba uvule izixhobo ezinamandla ngakumbi kunye nokuhombisa ubugcisa kwisiseko sakho. Ezo zinto zokuhombisa zisebenza ngenjongo, nganye idibanisa isibonelelo ngexesha lokudlala.
Iziphumo ezibi 2
Ukuba & ampos; ungumlandeli womxube phakathi kwe-sci-fi kunye ne-horror, emva koko isiphumo sokuFa 2 ngumdlalo wakho. Abekho abanye abadlali kulo mdlalo, nguwe kunye neqela leentshaba ezikhubazekileyo kwisiphekepheke. Umgangatho wemizobo uyamangalisa kwaye uvakalelo ngokubanzi lufana kakhulu nolomdlalo ovela kuthotho lweDoom. Nangona kunjalo, Iziphumo eziBini ezi-2 zikuvumela ukuba ukhethe oonobumba abathathu oza kudlala kubo, nganye inendlela yokudlala eyahlukileyo, ukongeza ixabiso lokudlala kwakhona kumdlalo. Njengesiqhelo, uza kuvula izakhono kunye nolunye uphuculo olwenziweyo ukwenza ubomi bakho bube lula. Iziphumo eziBini ezi-2 sesinye sezo zihloko ezikwenza ukuba ucinge malunga nokuba kude kangakanani na nokudlala imidlalo eshukumayo kule minyaka imbalwa idlulileyo, ngakumbi xa kufikwa kwimidlalo yasimahla.
Kuya kwabafileyo 2
Ukuya kwabafileyo 2 kukulandelelana kwesidubuli esidumileyo seZombie. Njengoko unokulindela ukuba ibali lenzeke kwihlabathi lasemva kokubhujiswa apho iZombies zikhulu khona. Ngezixhobo ezininzi zokukunceda uhlukane neentloko ezininzi kwimizimba yabo edibeneyo, lo mdlalo uyakhawuleza ngokukhawuleza, inqanaba ngalinye ngokwenyani libalekela ubomi bakho. Amanqanaba amashumi amathandathu anokugcina uxakekile okwethutyana, kodwa ngaphaya koko, abaphuhlisi bagcina umdlalo uhlaziyekile ngeziganeko zonyaka kunye nemiceli mngeni yemihla ngemihla.
IBlitz Brigade yi-MMO shooter yokuqala, apho ukhetha ukuba yenye yeeklasi ezisixhenxe ezinezakhono eziphezulu kwaye udibane nabanye abadlali ukuze ubethe iintshaba zakho kumdaka.
Umphezulu wobugcisa kwi & t
Eyona nto ibalulekileyo kumthala wenqaku 7 okhusela isikrini
Mamela esi silumkiso kungenjalo unokuphangwa ungaboni
I-malware engenakususwa ye-Android iya kuzifaka kwakhona nasemva kokusetha kwakhona kwefektri
UJuke nuke: Uqinisekisa njani ukuba usasazo olungxamisekileyo kunye nezilumkiso ze-AMBER kwifowuni yakho ye-iOS / ye-Android ziyenziwa
Isivumelwano se-AT & T BOGO siquka i-Apple iPhone 7, LG G5 kunye ne-Samsung Galaxy S7
Ungajonga njani ukuba ukulungele na ukuphuculwa kwefowuni nge-AT & T, iVerizon, iSprint okanye iT-Mobile
Ngaba lo mfanekiso uyangqina ukuba i-Samsung Galaxy Note 7 ayinamanzi?
Ukuthenga okungcono kukuvumela ukuba ubhalise kwangaphambili kwi-Samsung Galaxy Note 10 kwaye ufumane iphedi yokutshaja ngaphandle kwamacingo ngexabiso lesiqingatha